ईमेलको बारेमा एनीयोस व्यक्तिहरू के | Martech Zone
ईमेलको बारेमा मान्छेलाई कुन कुरा लाग्छ
मंगलवार, अगस्त 23, 2011 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
CcLoop मा मानिसहरूले यो इन्फोग्राफिक सँगै राखेका छन् मानिसहरूलाई ईमेलको बारेमा मानिसहरूलाई के कष्ट दिन्छ।
अमेरिकी अनलाइन उपभोक्ताहरु को%%% संचार र व्यापार को लागी ईमेल प्रयोग गर्दछ। यो नयाँ कुराकानी गर्न र नयाँ, अवस्थित र भविष्यका ग्राहकहरूको लागि उत्तम उपकरण हो। जे होस्, ईमेल यसको चिढाइएको बिना होईन। यी मुद्दाहरूको बाबजुद, ईमेल कहिल्यै प्रतिबिम्बित भएको छैन र आउने बर्षहरूमा बढ्दै जान्छ। अझै अपन्वितृत? तल इन्फोग्राफिकले तपाईंको दिमाग परिवर्तन गर्न सक्दछ:
यसमा एउटा नोट ... म अलि पछि धकेल्न सक्छु कि ईमेल तपाईंको लागि कुर्दै छ र तपाईंको तालिकामा फिट हुन्छ। आजका दिनमा इ-मेलका अपेक्षाहरूमा धेरै आकर्षकता पाइयो। यदि मैले मेरा केही ग्राहकहरूको घण्टा भित्र ईमेलको जवाफ दिएन भने, यो भ्वाईस मेल, च्याटहरू, फेसबुक पोस्टहरू, पाठ सन्देशहरू ... अर्घको साथ अनुसरण गरिएको छ!
Tools० उपकरणहरू, Sl० स्लाइडहरू, Min० मिनेट